Arabia Saodita : Vely Karavasy Miisa 1500 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2018 15:02 GMT
(Marihina fa tamin'ny 1 Novambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanameloka 15 taona an-tranomaizina sy vely karavasy in-1.500 ilay dokotera Egyptiana Raouf Amin i Arabia Saodita noho ny nanomezany fanafody fampatoriana izay lasa iankinany loha ny printsy vavy Saodiana iray raha mbola niasa tany amin'ny hopitaly Saodiana izy. Nandà ny fanamelohana azy ho tompon'andraikitra tamin'ny fanomezana ity printsy vavy ity ilay fanafody mahadomelina i Dr. Raouf Amin .
Nanapa-kevitra ny hitantara ny tantarany tao amin'ny bilaogy Dokotera Tsy Manan-jo ny vadin'i Dr. Amin:
“Dimy taona lasa izay, nampanantsoina tany amin'ny lapan'ny printsy Saodiana izy (Dr. Amin) hikarakara ny vadiny. Nahazo tsindrona morphine izy mba hanamaivanana ny fanaintainana taorian'ny nahatapahan'ny hazondamosiny, izay nentina tany Etazonia mba ho tsaboina. Lasa nitady ity zava-mahadomelina ity foana izy rehefa niverina tany Arabia Saodita. Nanaiky ny hitsabo azy tamin'io fanafody maha-domelina io mandra-pahasitrany i Dr Raouf, rehefa nifanaraka tamin'ny vadiny, izay nitranga tamin'ny volana Martsa
Hoy ny vadin'ilay dokotera nanohy: “Noho izany, nanapa-kevitra i Raouf ny hampihena tsikelikely ny fatran'ny morphine, izay nalainy tany amin'ny hopitaly, araka ny toro-hevitry ny printsy. Rehefa sitrana ny printsy vavy dia niverina indray tany Egypta i Raouf ary hitany fa tsy navela handao ny Fanjakana izy. Fantany taty aoriana fa ny dokotera Saodiana iray izay nosamborina niaraka tamin'ny tsindrona sy ny fanafody maha-domelina no nilaza fa tsy maintsy manome izany an'i Raouf izy . “
Nandritra ny fitsarana azy voalohany, voaheloka telo taona an-tranomaizina sy vely karavasy miisa fitonjato i Dr. Raouf Amin. Nitombo anefa ny saziny rehefa nanao fampakarana izy. Hahazo vely karavasy miisa 10 ka hatramin'ny 15 isa-kerinandro izy, mandritra ny dimy ambin'ny folo taona an-tranomaizina. Tsy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ihany no manameloka ity sazy ity ​​fa ny Minisitry ny Atitany Egyptiana sy ny sendikan'ny mpitsabo Egyptiana ihany koa. Hoy i Dr. Hamdy El Sayed, ny filohan'ny sendika, tao amin'ny AFP:
“Manohitra tanteraka ity didim-pitsarana ity izahay ary efa niantso ireo manampahefana tao Kairo sy tany Arabia Saodita, sy ny Filoha Hosni Mubarak, mba hiditra an-tsehatra.”
“Tsy nahazo fitsarana ara-drariny izy . Tsy nisy akory ny fanadihadiana avy amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana . Fampijaliana bebe kokoa no hita amin'ity didim-pitsarana ity fa tsy ny rariny ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna velively, eny fa na dia ao amin'ny Sharia aza (lalàna Islamika) “.
Tsara kokoa ny nanameloka azy ho faty toy izay mampijaly azy toy izany. 15 taona an-tranomaizina sy vely karavasy miisa 1 500, habibiana izany, eny fa na dia ho an'ny mpamono olona aza. “
“Aiza ny Minisitry ny Raharaham-bahiny?
Aiza ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona?
Aiza ny Minisitry ny fahasalamana? “